» गोकुल बास्कोटा ७० करोड प्रकरणलाई लिएर यहि मंगलबार अख्तियारमा हाजिर हुन्छु:बिजय प्रकाश मिश्र ,ताली या गाली ? गोकुल बास्कोटा ७० करोड प्रकरणलाई लिएर यहि मंगलबार अख्तियारमा हाजिर हुन्छु:बिजय प्रकाश मिश्र ,ताली या गाली ? – हाम्रो खबर
गोकुल बास्कोटा ७० करोड प्रकरणलाई लिएर यहि मंगलबार अख्तियारमा हाजिर हुन्छु:बिजय प्रकाश मिश्र ,ताली या गाली ?
काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ मोलमोलाइ गरेको भनिएको अडियो टेप बाहिर ल्याएका विजयप्रकाश मिश्रले आइतबार अदालतमा हाजिर हुने बताएका छन् ।
मिश्रलाई म्याद तामेल गर्न गएका अदालतका कर्मचारी पटक–पटक घर नभेटिएको भन्दै फर्किएका थिए । मुद्दा दर्ता गर्दा मिश्रको घर लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका–७ भनिए पनि उनी काठमाडौंमा बस्छन् । तर, दुबै ठाउँमा म्याद तामेल गर्न जाँदा घर फेला नपारेपछि अदालतका कर्मचारीले उनलाई ‘बेपत्ते म्याद तामेलको सूचीमा राखेका छन् ।